आफूलाई ब,ला,त्कार गरेका पुरुषलाई घण्टौँ आफ्नो अगाडी राखेर यि २५ वर्षकी युवतीले गरेको कुरा सुन्दा जो कोही अचम्मित हुन्छन् – Gazabkonews
आफूलाई ब,ला,त्कार गरेका पुरुषलाई घण्टौँ आफ्नो अगाडी राखेर यि २५ वर्षकी युवतीले गरेको कुरा सुन्दा जो कोही अचम्मित हुन्छन्
आफूलाई ब,ला,त्कार गरेका पुरुषलाई घण्टौँ आफ्नो अगाडी राखेर यि २५ वर्षकी युवतीले गरेको कुरा सुन्दा जो कोही अचम्मित हुन्छन्, ४ घण्टापछि दिइन् माफी, थाकेका युवक खोज्याएर लज्जित हुँदै बाटो लाग्दा यि युवतीले हेरिरहिन्
काठमाडौं। -यौ-न हिं-सा-को शि-का-र भएकी २५ वर्षकी एक युवतीले आफूलाई ब-ला-त्का-र गर्ने व्यक्तिलाई माफी दिएर अहिले दु-र्व्य-व-हार र यौ-न हिं-सा पी-डि-तलाई सहयोग गरिरहेकी छिन् । क्यानडाको ओन्टारियोकी मार्ली लिसका अनुसार उनी अ-प-रा-धीलाई सजाय दिलाउने भन्दा पी-डितको घा-उ निको पार्ने र उनीहरुलाई नयाँ जीवन जिउन सघाउने कुरामा जोड दिन्छिन् ।
स्थानीय मिडिया रिपोर्टअनुसार मार्लीले २०१९ मा आफूलाई ब-ला-त्का-र गर्ने व्यक्तिको करिब ४ घण्टा सामना गरेकी थिइन् । उनले ब-लात्का-रीलाई मा-फी दिएकी थिइन् । त्यहाँको नियमअनुसार यसरी माफी दिने प्रक्रियालाई रेस्टोरेटिभ जस्टिस प्रोसेस भनिन्छ ।
मार्लीले तीतो अतित बिर्सिएर अगाडि बढ्नु जरुरी भएकोले ब-ला-त्का-रीलाई माफी दिएको बताएकी थिइन् । मार्लीका अनुसार उनी केवल यत्ति जान्न चाहन्थिन् कि ब-ला-त्कारीले उनीसँग यस्तो किन गरे ?
काठमाडौँ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनको आरोपपछि विन्ध्यावासिनी म्युजिक प्रालीकी अध्यक्ष लिना शर्मा प,क्रा,उ परेकी छिन् । लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल लगायतले उ,जु,री दिएपछि विन्ध्यावासिनी म्युजिक प्रालीकी अध्यक्ष शर्मालाई प्रहरीले सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
लिनालाई काठमाडौँको धुम्बाराहीबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता डीएसपी प्रमेश विष्टले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता विष्टका अनुसार अध्यक्ष लिनाविरुद्ध जाहेरी परेपछि अदालतको अनुमति लिएर उनलाई प,क्रा,उ गरिएको हो । आइतबार गायक प्रमोद खरेल लगायतका कलाकारहरु उजुरी दिन पुगेका थिए । लिनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको बताइएको छ । प्रतिलिपी कानुनअनुसार आफूले गीतको स्वामित्व र रोयल्टी नपाएको भन्दै गायक प्रमोद खरेलले उ,जु,री दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
विनयजंगकी हुनेवाला पत्निले खोलीन् यस्ता रहस्यहरु
काठमाण्डौ । सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिएकी सर्मिला वाईबाले विनयजंग रिहाब सेन्टरबाट फर्किने पर्खाईमा छिन् । उनले विनयजंगले धेरै कुरा लुकाएका छन् र यतिबेला उनी रिहाबमा भएको हुनाले उनीसंग कुरा गर्न नसकिने अवस्था छ भन्दै विनयजंगको पर्खाईमा आफु रहेको उनले बताएकी छिन् । बेवारिसेहरुको व्यबस्थापन गर्ने क्रममा विनयजंगले धेरै कुराको घोटाला गरेको भन्दै सर्मिलाले शुरुवाती दिनदेखि नै विनयजंगलाई यो कुराको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।
सर्मिलाले विनयजंगको न केवल काम गर्ने शिलशिलाको विरोध गरिरहेकी छन् उनले त विनयजंगको चरित्र समेत उदांगो पार्न पनि पछि परेकी छैनन् । विनयजंगको विषयमा बोल्दा सर्मिलाले जहिले पनि आफ्ना कुरा निकै नै आवेगमा आएर आ’क्रो’श’पु’र्ण तरिकाले राख्ने गर्छिन् । शुरुशुरुमा उनले केवल विनयजंगलाई आफ्नो टार्गेट बनाएपनि पछिल्लो केही महिनादेखि उनले सपना रोका मगरलाई पनि मन लागेजति भन्न बाँकि राखेकी छैनन् ।
विनयजंग र उनीबीच भएको बैमनस्यताको विषयमा खुलेर कुनै पनि कुरा बाहीरीएको छैन । न विनयजंगले उनले लगाएको आरोपको कुनै प्रतिकृया नै दिएका छन् । सर्मिलाले विनयजंगको विरोध गर्दागर्दै अन्ततः विनयजंग रिहाब सेन्टरमा गएका छन् । विनयजंग रिहाब सेन्टरमा गएलगत्तै सर्मिलाले विनयजंग बाहिरीएपछि विनयजंग र सपनालाई संगै राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएकी छन् । उनले कुनै पनि हालतमा विनयजंगले र सपनाले वास्तविक कुरा सबै नेपालीलाई बताउनु पर्ने अडान राखेकी छिन् ।
यसै क्रममा ‘बेमेल र मन मुटाव कस्को हुँदैन र तर भयो भन्दैमा हा’तपा’त गरिहाल्ने ? त्यो पनि बैशाषीको साहारामा हिंड्ने एक अपांग व्यक्तिलाई । यो तरिका भएन ।’ भन्दै यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला सबैले सर्मिला वाईबाप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन् । सर्मिला आफुलाई सामाजिक अभियन्ता मान्ने एउटी युवती हुन् । उनले जुन सुकै मिडियामा दिने अन्तरवार्ताहरुमा आफुले मात्रै राम्रो गरेको र अरु सबै भ्रष्टचारी भएको कुरा खुलेरै बताउँदै आई रहेकी हुन्छिन् ।
नरनाथ गौतम एक अपांग व्यक्ति हुन् । उनै नरनाथलाई सर्मिलाले सबैको अगाडी हा’तपा’त ग’रेकी छन् । हा’त’पा’त ग’र्नुको विषय पनि विनयजंग र सपनासंग जोडिएको रहेछ । सर्मिलाको यो व्यवहारको यतिबेला सामाजिक सञ्जालभरी निकै नै विरोध भई रहेको छ । जति नै रिस उठेपनि र व्यवहार नमिले पनि कसैमाथि हा’त उ’ठा’उनु गलत कुरा हो । तर सर्मिलाले त एउटा अपांगमाथि हा’त उ’ठाए’की छन् । उनको यो व्यवहारको सबैले चौतर्फि विरोध गरेका छन् । बसिरहेको नरनाथलाई बाघले ‘झ’म्टि’ए झैं गरी सर्मिलाले यसरी ‘हा’त’पा’त ग’रेकी थिईन् ।
यसै क्रममा वेवारीसेहरुको व्यवस्थापन गर्ने विनय जंग बस्नेत र उनले छोरी मानेको उनकी छोरी सपना रोका मगरबीच पछिल्लो समय अनेक थरीका चर्चापरिचर्चा चल्दै आईरहेको छ । यो विषयमा धेरैले धेरै थरीका अनुमान र गसिपहरु गर्दै आएका पनि छन् । कतिपयले विनयजंगकै कारण सपना टाढिएको भन्ने टिकाटिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले सपना स्वार्थी भएको भन्दै प्रतिकृया दिएका छन् । खासमा यी बाबु छोरीबीचको सम्बन्धको बारेमा वास्तविक के भएको हो भन्ने कुरा कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन् ।
पुजाको भनाई अनुसार सपना र विनयजंगको सम्बन्ध गएको दशैंपछि नै टाढिएको कुरा उनले मिडियासामू बताएकी छन् । उनको भनाई अनुसार सपना र विनयको बीच कुनै पनि आपसी मतभेद नभएको बुझिएको छ । पुजाले भनेकी छन्,‘सपनाले पढ्दै काम गर्ने कुरा सुनाईन् । र त्यसैमा विनय सरले पनि आफ्नो विचार राख्नु भयो । र सपनाको विचारलाई पनि समर्थन गर्नु भयो । उहाँहरु दुवैबीच कुनै पनि मतभेद भने छैन ।